Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao momba ny Hotely sy Resort » Tena maty ve ny fikarakarana isan-trano ao amin'ny hotely?
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao momba ny fahasalamana • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • fanorenana • tompon'andraikitra • Safety • Tourism • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Etazonia Vaovao Vaovao
Ny fanadihadian'ny indostria hitantsika dia manondro fa ny fanovana ny fikarakarana ao an-trano dia mety hitarika amin'ny tahiry 100 ka hatramin'ny 200-point-point ary hisy fiatraikany amin'ny fahombiazan'ny trano fandraisam-bahiny. Na izany aza, ny tsy fahampian'ny mpiasa sy ny mpikarakara trano fiofanana fanampiny dia mila izao rehefa tsy manadio efitrano mandritra io fotoana io dia manakana ny tahan'ny famokarana ho avo kokoa.
Hotely maro no voatery nanaparitaka serivisy nandritra ny areti-mandringana.
Ny fampiatoana ny fikarakarana tokantrano isan'andro dia iray amin'ireo safidy ho an'ny hotely maro.
Hilton dia iray tamin'ireo voalohany nivoaka tamin'ny fomba ofisialy amin'ny fikarakarana trano.
Ny trano fandraisam-bahiny dia niady mafy ny hijanona tamin'ny 2020: ny famakiana fotsiny dia noheverina ho zava-dehibe. Mba hanaovana izany, hotely maro no noterena hiasa amin'ny fanapahana serivisy araka izay azony atao, na dia ilaina aza.
Ny iray amin'ireo niavaka indrindra dia ny fampiatoana ny fikarakarana tokantrano isan'andro amin'ny hotely maro. Ny serivisy, rehefa nalain'ny vahiny ho azy, dia naterina tamin'ny fangatahana ary matetika tsy natolotra raha tsy andro maromaro taorian'ny fizahana.
Hilton dia iray tamin'ireo voalohany nivoaka tamin'ny fomba ofisialy momba ny fikarakarana trano, fa ny ankamaroan'ny marika dia narahina, na nilaza izany tamin'ny sehatra ho an'ny daholobe na nampandre ny mpanjifa rehefa niditra izy ireo. Ny tetika dia toa paikady iray hamerana ny vahiny sy ny mpiasa amin'ny fihanaky ny COVID. -19, fa io koa, dia noheverina ho mpanangona vola, mametra ny ora mpikarakara trano.
Ny sasany milaza fa ny fikasana hangataka trano any an-trano amin'ny fangatahana dia iray amin'ny cascade amin'ny serivisy sy ny kojakoja tsy misy vidiny, mitovy amin'ny fomba fiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka, izay misy sarany mifamatotra amin'ireo zavatra isan-karazany izay nahazatra.
Misy fiatraikany marina ve ny fanovana eo amin'ny farany? Mitahiry vola sy mampitombo ny tombom-barotra? Mbola hitohy ve izany rehefa miakatra ny fibodoana? Ahoana ny hevitry ny vahiny?
Toy ny ankamaroan'ny lafiny indostrian'ny hotely, ny olana dia sarotra kokoa noho ny mety hoeritreretin'ny olona azy raha vao jerena.